संकटकै बेला बनाइँदैछ प्रधानमन्त्रीलाई दुई खर्बको घर ! - Sidha News
संकटकै बेला बनाइँदैछ प्रधानमन्त्रीलाई दुई खर्बको घर !
बीबीसी । भारतको राजधानी दिल्लीको केन्द्रमा पर्ने राजपथस्थित खुला सार्वजानिक क्षेत्र वर्षौँदेखि हजारौँ मानिसहरुका लागि भेला हुने, घाम ताप्ने, आइसक्रिम खाने ठाउँका रुपमा रहँदै आएको छ । तर राष्ट्रपति भवनबाट इन्डिया गेटसम्म फैलिएको यो तीन किलोमिटरको सडक क्षेत्र यतिबेला भने धुलाम्मे अवस्थामा छ ।
अहिले त्यहाँ मानिसहरुलाई प्रवेश गर्नबाट रोक्न ब्यारिकेड लगाइएको छ भने कामदारहरुले पाइप र टायलहरु मिलाइरहेको देख्न सकिन्छ । यो काम वास्तवमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उपप्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ घर, नयाँ संसद् निर्माण गर्ने परियोजना अन्तर्गतको काम हो ।
यसका लागि झन्डै दुई खर्ब भारतीय रुपैँया खर्च लाग्ने अनुमान रहेको छ । तर यो ‘सेन्ट्रल भिस्ता’ परियोजना २०१९ को सेप्टेम्बरमा घोषणा भएदेखि नै विवादमा आइरहेको छ ।
त्यति धेरै रकम बरु नागरिकहरुको हितका लागि या दिल्लीको हावालाई सफा स्वच्छ राख्नमा खर्च गर्दा बढी उपयोगी हुने आलोचकहरुको भनाइ रहँदै आएको छ । दिल्लीको हावा संसारकै सबैभन्दा दूषितमा पर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो नयाँ घर आगामी डिसेम्बर २०२२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ । इतिहासविद् नारायनी गुप्ताले बताइन्, “यो पूर्ण रुपमा अनुचित हो । महामारीले हजारौँको ज्यान लिइरहँदा, चिहानघर भरिएर ठाउँ नभएको अवस्थामा सरकारले कसरी हावामा महल ठड्याउन सक्छ ?”
सबै हिसाबमा मोदीको हालको वासस्थान पनि अत्यन्तै विलासी रहेको छ । लोक कल्यान मार्गमा रहेको १२ एकडको कम्प्लेक्समा पाँचवटा बंगला छन् र यो राष्ट्रपति भवन अनि संसद् भवन भन्दा तीन किलोमिटरको दुरीमा छ । प्रधानमन्त्रीको वासस्थान बाहेक सो कप्लेक्समा अतिथिहरुका लागि समेत बस्नेखाने ठाउँको व्यवस्था छ, कार्यालय, मिटिङ गर्ने कोठा, थिएटर अनि हेलीप्याड पनि रहेको छ ।
केही वर्ष अगाडि मात्र त्यहाँ नजिकैको सफदार्जुङ विमानस्थलसँग सीधै जोडिने जमिन मुनिको सुरुङ पनि निर्माण गरिएको थियो । दिल्लीमा आधारित आर्किटेक गौतम भाटिया भन्छन्, “त्यो पूरै सकड क्षेत्र भारतीय प्रधानमन्त्रीको कब्जामा छ । ”
यस्तोमा वातावरण र संरक्षणवादीहरुले पारदर्शिता नअपनाइएका बारेमा पनि गुनासो गरिरहेका छन् । किनकी यस परियोजना अन्र्तगत हजारौँ दुर्लभ कलात्मक वस्तु र सामग्रीहरु एक ठाउँबाट अर्कोमा सार्नुपर्नेछ ।
सरकारी डक्युमेन्ट अनुसार प्रधानमन्त्रीले दशवटा चार तले भवन प्रयोग गर्नेछन् जुन राष्ट्रपति भवन र दक्षिणतर्फको ब्लकका बीचमा हुनेछ । दक्षिण ब्लकमा हाल रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय अवस्थित छन् । यसमा अस्थाइ अफिसका रुपमा प्रयोग गरिएको बेलायतद्वारा निर्मित ब्यारेकहरु भने भत्काइने बताइएको छ ।
तर यस परियोजनाको लक्ष्य वास्तवमा फरक रहेको मोहन गुरुस्वामीको दाबी छ । उनले भनेका छन्, “अहिले सबै निर्णय लिने किसिमका कामहरु प्रधानमन्त्रीको घरबाट हुने गरेको छ ।
उनीसँग यसका लागि सयौँ स्टाफहरु छन् र दिनमा तीनसय वटासम्म फाइलहरु उनीहरुले सम्हालिरहेका छन् । यसरी उनले सबै शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गराइरहेका छन् । उनले राष्ट्रपतिमा एकिकृत सरकारको सिर्जना गरिरहेका छन् र यसैका लागि उनलाई ठूलो भवन : ह्वाइटहाउस या क्रेम्लिनको आवश्यकता परेको हो । ”
गुरुस्वामीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीहरु सधैँ पछाडिका भवनमा मात्र बस्ने गर्दथे तर मोदीले चाहिँ आफूलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यता सार्वजनिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको राजपथको भविष्य अब के हुनेछ भन्नेमा पनि धेरैको चासो छ ।
त्यो स्थल विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्ने, बत्ती बाल्ने, आन्दोलन गर्नका लागि पनि लोकप्रिय ठाउँ हो । यसमा सरकारले सो क्षेत्र सार्वजनिक नै रहनेमा जोड दिइरहेको छ तर आलोचकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको घरबाट नजिक हुनुले आन्दोलन र ठूलो स्तरका भेला आयोजना गर्न अब अनुमति दिइने छैन ।